I-BUYAAS Ngathi - Abenzi be-Anabolics Steroids manufacturers
I-Hengfei Biological Technology Co., Ltd.
ULohehe Hengfei Biological Technology Co., Ltd., efunyenwe kwi-2008, yinkampani ephezulu yezolimo ezinokwenziwa kwemithi yokudibanisa imveliso, uR & D kunye neentengiso. Ibeka kwiLohehe Chemical Industry Park, ezenzelwe uphando nophuhliso lweshishini eliphambili lwezobisi, ukubonelela ngeemveliso ezintsha kunye neenkonzo eziphezulu kwiinkampani zonyango.
I-Hengfei Biotechnology inesigqeba esinamandla se-biotechnology, iteknoloji yezobugcisa kunye nokuhlolwa kohlalutyo, kugxininise ekuphuhliseni ama-API, abaphambili kunye namayeza amnandi, ngelixa bebonelela ngeenkonzo eziphezulu ze-CRO, iinkonzo ze-CMO kunye novavanyo lokuhlalutya kunye neenkonzo zophando eziphezulu kwiinkampani kwi-biomedical industry.
I-Hengfei Biotechnology ineqela labaphathi abanamava kunye neqela lokuqala lodidi lwe-R & D, kuquka neengcali ezininzi ezivelele kwimida yophuhliso lwenkqubo yophuhliso lweeyeza kunye nophando lwemveliso yezobisi. Kuyaziwayo kwaye kukhuphiswano lubalulekile kule mimandla yechematic chemistry, ubuchwepheshe bezobugcisa, ukuphuhliswa kweziyobisi zonyango, ukuhlaziywa kwezinto eziphilayo, njl njl. Abathengi beenkampani kunye namaqabane avela kwihlabathi lonke, ukudala ubudlelwane obusondeleyo kunye neenkampani ezininzi zokurhweba eNtshona Melika, eYurophu, eIndiya. kunye neChina.
Ukugxininisa kumgaqo we "Quality Foundation, uMthengi Wokuqala, iNkonzo Yokwethembeka, Intsebenziswano Yomphakathi", i-Hengfei Biotechnology Co., Ltd. inikezela abathengi ngemveliso eyanelisayo ngokuphonononga okugqibeleleyo kunye neenkonzo eziphezulu.
Ukhangele phambili ngokubambisana ekusebenzisaneni nawe kunye nokufumana i-win2win elizayo!
CEO, uMsunguli woshishino
UMarko. Z. C
ishishini eliphezulu lokuxuba imveliso yezinto eziphilayo ukuze kuhlanganiswe imveliso, i-R & D kunye neentengiso.
CRO, iinkonzo ze-CMO
IiNkonzo zoPhando loMgangatho
ngesicwangciso esiqilileyo se-biotechnology, ubuchwepheshe beekhemikhali kunye nokuhlolwa kohlalutyo, kugxininise ekuphuhlisweni kwama-API, abaphambili kunye namachiza amachiza, ngelixa bebonelela nge-CRO esemgangathweni, iinkonzo ze-CMO kunye nokuhlolwa kohlalutyo kunye neenkonzo zokuphanda ngekhwalithi kwiinkampani kwi-biomedical industry.
Sinebhoratri ephezulu kakhulu kunye nezixhobo, iqela le-R & D ephezulu yehlabathi kunye nabasebenzi bezolawulo.
ISO9001: I-2000 kunye neGP Certification.
Bhalisa ukuze uthole ulwazi olutshanje malunga neklinikhi yethu.